Mas’uuliyiin lagu helay inay wax is dabamriyeen ayaa lagu riday xukuno kala duwan… – Hagaag.com
Mas’uuliyiin lagu helay inay wax is dabamriyeen ayaa lagu riday xukuno kala duwan…
Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa maanta xukuno kala duwan ku riday dhawr xubnood, oo ay ku jiraan shaqaale ka tirsan Wasaaradaha Xukuumadda.
Xubnaha la xukumay ayay Maxkamadda Gobolka Banaadir ku heshay lunsasho hantiyadeed iyo wax is daba-marin, iyadoona sidoo kale aanay hadda ka dib xilal ka qaban doonin Xafiisyada Dowladda.
Xubnaha la xukumay ayaa kala ah:-
1: Agaasimaha Maamulka iyo Maaliyadda Wasaaradda Kalluumeysiga Iyo Khayraadka Somaliya, Guuleed Maxamed Ibraahim waxa ay Maxkamadda ku xukuntay 10 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo gaaraya $2,366 iyo in uu qasnadda dowladda ku celiyo $137,907 dollar iyo ka reebista xafiis dadweyne.
2: Milkilaha Shirkadda Maamuus Generaal Contarcting and Service iyo Madaxa Hubinta Commitment Control ee Xafiiska Xisaabiyaha Guud Ee dowladda Cali Sheekhdoon Cabdi waxaa lagu xukumay 9 Sano oo Xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $3,549 iyo in qasnadda dowladda uu ku celiyo $58,505 dollar, ganaaxa waxaa wehliya ka reebid xafiis dadweyne.
3: Aweys Xasan Cumar xisaabiye ka tirsan waaxda Wasaaradda Warfaafinta waxaa lagu xukumay 6 bilood oo xarig ah iyo ganaax lacageed $1,183.
4: Khadar Aweys Xasan Maamulka Shirkadda Alxabiib Business Centre waxaa lagu xukumay Saddex sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $1,183, waxaana dhammaan masuuliyiinta la xukumay ay Maxkamaddu sheegtay in uu u furan yahay rafcaan ku siman muddo 30 maalmood ah.
Isniintii ayay ahayd markii Maxkamadda Gobolka Banaadir ay xukuno adag ku riday xubno ka tirsanaa Shaqaalaha Wasaaradda Caafimaadka oo lagu helay falal musuq maasuq.